Shiinaha Warshad Mashiinka Milling Gawaarida Xawaaraha Sare &. | Oturn
Buugga wax soo saarka ee SG1614 wuxuu soo maray geeddi-socodka shirarka gaarka ah ee shirkadda wuxuuna muujiyey saxsanaanta sare, waxtarka sare iyo xasilloonida sare ee suuqa.
SG1614 waxay soo martay habka isku imaatinka shirkadeed waxayna muujisay saxnaan sare, waxtarka sare iyo xasilloonida sare ee suuqa.
Qalabka mashiinka aadka u sareeya ayaa ka muuqda warshadaha wax soo saarka caaryada, warshadaha wax soo saarka baabuurta, qalabka caafimaadka ee saxda ah, warshadaha aerospace iyo dhinacyada kale. Iyada oo tiknoolajiyad heer sare ah iyo waxqabadka mashiinka heer sare ah, waxay ku guuleysteen ammaan wanaagsan waxaana si ballaaran u taageeray oo u xaqiijiyay macaamiisha cusub iyo kuwii hore. Iyo aaminaad.
Qaab dhismeedka fuselage wuxuu qaataa naqshad si buuxda loo taageeray, iyo jilitaanka kumbuyuutarka
Falanqaynta qaabdhismeedka jirka waxaa loo sameeyaa qaybaha muhiimka ah ee walaaca. Saldhiga mashiinka
wuxuu xambaarsanyahay xoog 4000kgf ah oo qalqalkiisa wuxuu kujiraa 0.01mm. Waxay si buuxda u adkeysan kartaa
shuruudaha adag ee goynta.
Tiirku wuxuu qaataa qaab dhismeed isku dhafan oo ballaadhinaya aagga taageeraya si loo hubiyo dunmiiqa iyo qalliinka xawaaraha sare ee toosan, kaas oo kordhin kara
qallafsanaanta iyo xasilloonida nolosha adeegga. Ku qalabaysan dunmiiqa xawaare sare leh, waxay si fudud ula kulmi kartaa shuruudaha goynta adag ee adag ee birta daawaha ah ee adag.
Tilmaamaha toosan ee duubista tooska ah ee heerka-koowaad ah ee laga keeno Jarmalka iyo Taiwan
kubbadda kubbadda ayaa loo adeegsadaa si loo hubiyo saxnaanta joomatariyeed iyo saxsanaanta qaabeynta qaab-dhismeedka guud, xasilloonida iyo nolosha adeegga.
Howl wadeenku wuxuu adeegsadaa sumad heer-koowaad ah oo Jarmal ah, taas oo ka sarreysa tartamayaasha gudaha
isla heerka marka la eego miisaanka wax soo saarka iyo saxnaanta meeleynta saxda ah.
The xawaaraha sare dhisay-in dunmiiqa iyo qaab-dhismeedka macquul ah si buuxda loo hubiyo in
dunmiiqa joogteyn karo hawlgalka xasilloon oo sax ah inta lagu jiro xawaaraha sare ee joogtada ah
hawlgalka, oo wuxuu ku guuleysan karaa saxsanaanta sare iyo saameynta wax soo saarka dhalaalaya inta lagu jiro geedi socodka jarista.
Xawaaraha ugu sarreeya ee hawlgalka saddexda-dhidib ee mashiinka mashiinka ah wuxuu gaari karaa 24m / min, xawaaraha goynta wuxuu gaari karaa inta u dhexeysa 0-10M / min, taasoo gaabinaysa waqtiga howsha isla markaana hagaajinaysa waxtarka shaqada. Dunmiiqa waxay hubisaa waxsoosaarka xundhurta sare
iyo saxsanaanta wanaagsan iyo kalsoonida inta lagu jiro hawlgalka jarista. Xaaladaha jarista xawaaraha sare, hawlaha mashiinnada waxaa lagu dhammaystiri karaa si hufan.
Nidaamka xisaabinta xawaaraha sare wuxuu taageeraa saadaalinta barnaamijyada mashiinada awooda badan, wuxuuna saadaalin karaa tilmaamaha howlgalka qeybta 250 si loo hubiyo in uusan dib u dhac ku imaan doonin goynta xawaaraha sare, taas oo badbaadin karta waqtiga gudbinta isla markaana kordhin karta waxtarka 20 %.
X safarka dhidibka (mm)
Y safarka dhidibka (mm)
Safarka dhidibka Z (mm)
Aagga shaqeyn kara (dhererka dhererka x) (mm)
Fogaanta dusha miiska ilaa dusha dhamaadka dunmiiqa (mm)
Ballaca albaabka (mm)
Aaladda dunmiiqa (Kw)
Cabbirka mashiinka (mm)
Miisaanka mashiinka (T)
Nidaamka xakamaynta: Siemens 828D
Nidaamka xakamaynta: Mitsubishi M80A. FANUC 0i M
Nidaamka qaboojinta dunmiiqa
Lagu dhisay dunmiiqa 20000rpm (HSK-A63)
Nidaamka Neefsashada Pneumatic
Qaboojinta giraanta dunmiiqa
Xer buuxa oo leh daboolka kore
Miiska wareega ee CNC (dhidibka 4aad)
3-laambad calaamadeed midab leh, iftiin shaqeynaya
Baaritaanka goobta shaqada
Qalabka adeegga guud
Qaboojiyaha golaha wasiirada korontada
Hore: Mashiinka Milling Gawaarida Gawaarida culus
Xiga: Qodista Iyo Taabashada Mashiinka isku dhafan